Soo-saaraha Golaha Soo-saarista Shiinaha iyo Alaab-qeybiye | ZHJ
La xiriir Rivets
Wareegyada Trimetal Contact
Noocyada Xiriirka Biimalka
Rivets Xiriir adag
Tilmaamaha Xiriirka Korantada
Xiriirada Birta budada ah
Xiriirinta Button Alxanka
La Xidhiidh Golayaasha
Fiilooyinka Daawaha Lacagta ah
Xiriirinta badhanka alxanka
Rivet Xiriir saddex-bir ah
Rivet Xiriirka Bimetal
Rivet Contact adag
La Xidhiidh Golayaasha. SHZHJ waxay siisaa tiro balaadhan oo ah golayaasha xiriirka ee lagu soo saaray dhowr farsamooyin lifaaq ah. Shirarka iskuxirnaanta waxaa lagu sameeyaa foornada, soo-kicinta, iska caabbinta, iyo geeddi-socodka xakamaynta shuclada. Xiriirada sidoo kale waa la geyn karaa taageerooyinka xiriirka. SHZHJ waxay soo saartaa kulanno leh noocyo kala duwan oo ah qalabka taageerada xiriirka iyo foomamka.
FOB Qiimaha: US $ 0.02 - 2.00 / Cadad
Habka wax soo saarkaXarig furid → Dareemid xariijin → Pre feed
Heerka Wax Soo Saarka-3 150-300pcs / min。
1. buuq ma leh, gariir la'aan, aad ugu habboon qalabka khafiifka ah iyo kuwa jilicsan ee jeexaya. Qaabdhismeedka shaqada yar yar ka dib markii riveting.
2.can xakamayn karaa rivet rivet rivet ah: garashada waqtiga, riveting cadaadis joogto ah.
3.rotary riveting force saameyn yar, hubi in dusha sare ee shaqadu aysan waxyeello u geysan, ha dhaawicin lakabka korantada korantada iyo daaweynta kale ee dusha sare.
Waxyaabaha loo yaqaan 'rivet' oo leh wax-u-qabasho gaar ahaan wanaagsan, qoryaha rivet uma muuqan doono dhibaatada tayada, nolosha sare. Isla mar ahaantaana, fududahay in la beddelo oo laga samayn karo qaabab kala duwan, si loogu waafajiyo shuruudaha geeddi-socodka ee kala duwan, ku-habboonaanta ballaaran.
Nooca taageerada: Dahaarka ama dahaarka naxaasta ah
Codsiga: Shirarka waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa xirmooyinka. wareejiyeyaasha wareegga, gudbinta, furayaasha gidaarka, micro-biiroyaasha, badhannada riixa, iwm.
Sharaxaadda Badeecadda: SHZHJ waxay leedahay noocyo badan oo farsamooyin farsamo ah si ay isugu soo ururiso xiriiro iyo taageerooyin. Waxaan leenahay habab wax soo saar dabacsan si aan ula kulanno macaamiisha dalabyadooda kala duwan oo loo habeeyay. Nidaamka riveting waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa marka taageerada ay fududahay inuu saameeyo kuleylka inta lagu jiro habka alxanka. Riwaayad waxaa sidoo kale loo isticmaalaa biraha maaddada xiriirka ee ay adag tahay alxanka.
Habka wax soo saarka: Riveting Manual, riveting automatic, ee riveting caaryada, iwm
Hore: Rivet Xiriir saddex-bir ah
Xiga: Golaha alxanka
Golaha Xiriirka Ag
Golaha Xiriirka AgCu
Golaha Xiriirka AgFe
La xiriir Golayaasha ACB
La xiriir Golayaasha MCB
Xiriirinta Alxanka ee MCCB
Nala soo xiriir Ku dar: No.1234, Xinsongjiang Road, Songjiang Shanghai, Shiinaha Iimayl: info@shzhj.com Tel .: +86 21 3778 2156 Fakis: +86 21 3778 1636 Moobayl: +86 136 1187 5788 Web: www.shzhj.com
Jihada Degdegga ah